အိမ်မှာတင် အလွယ်တကူလေးလုပ်လို့ရမယ့် Vodka Cocktail ၅ မျိုး – DigitalTimes
အိမ်မှာတင် အလွယ်တကူလေးလုပ်လို့ရမယ့် Vodka Cocktail ၅ မျိုး
ဒီတစ်ပတ် TGIF အတွက်ကတော့ အသောက်တစ်လိုင်းလေးတွေအတွက် သီးသန့်ပေါ့.
ဘားသွား ဆိုင်ထိုင်သောက်ရမှာပျင်းလာပြီ အိမ်မှာတင်အေးဆေးသောက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Vodka တစ်ပုလင်းရှိရုံနဲ့ ကိုယ်တိုင် ကော့တေးလ်အလွယ်တကူလုပ်နိုင်တဲ့ Vodka cocktail ၁၀မျိုးကို ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်။ (Maple Syrup အစားသကြားသုံးနိုင်ပြီး Cocktail Shaker မရှိရင်တော့ ရေမဖိတ်တဲ့ အလုံပိတ်မတ်ခွတ်ထဲထည့် shake လို့ရပါတယ်)
Appletini ( ၅မိနစ်)
Vodka 50ml, apple juice 50ml, သံပုရာရည် ၁ဇွန်းနဲ့ (maple syrup အစား) သကြား ၁ဇွန်းကို ရေခဲထည့်ထားတဲ့ Shaker ထဲမှာထည့်ပြီး ခလောက်(shake) ပါ။ အရမ်းအေးလာပြီဆိုရင်တော့ ကော့တေးလ်ခွက်လေးထဲထည့်ပြီး ပန်းသီးစိတ်လေး တပ်လေးလိုက်ပါ။
Moscow mule ( ၅မိနစ်)
သတ္ထုမတ်ခွက်ထဲကို vodka 50ml ထည့်ပြီး ခွက်ရဲ့ 3/4 လောက်ထိ ရေခွဲတွေ ခွဲခြေပြီးထည့်ပါ။ အပေါ်မှာ Ginger beer လေးထပ်ထည့်ပြီး ဖြေးဖြေးချင်း မွှေပါ။ ဂျင်းအပြားလေး ၁ဖက်၂ဖက်ထည့်ပြီး ခွက်နှှုတ်ခမ်းမှာ သံပုရာသီးပါပါးလေးတင် ပူရှိန်းပူစီနံရွက်လေးတင်လိုက်ရင် ဆိုင်မှာသောက်တဲ့ Feeling မျိုးရပါလိမ့်မယ်။ 😉
Caipirovska ( ၅မိနစ်)
သံပုရာသီးတစ်လုံးကို အစိတ်စိတ်ပိုင်းပြီး ဖန်ခွက်အောက်ခြေမှာအရင်ထည့်လိုက်ပါ။ မှုန်နေတဲ့သကြားကို ၂ဇွန်းထည့်ပြီး အားရပါးရမွှေပါ။ ပြီးရင်တော့ ရေခဲကိုသေးသေးလေးဖြစ်အောင ်ခွဲထည့်ပြီး vodka 50ml ထပ်ထည့်ပါ။ အားလုံးကိုသမအောင်မွှေပြီးရင်တော့ vodka ချဉ်ချဉ်လေးရပါပြီ။
White Russian( ၅မိနစ်)
ဒါလေးကတော့ အဆန်းလေးပါပဲ။ vodka 50ml, coffee liqueur 25ml, cream ၁ဇွန်းနဲ့ ခွက်ထဲကိုရေခဲတွေပြည့်အောင်ထည့်ပြီး မွှေလိုက်ရင် ကော်ဖီန့ံ့မွှေးမွှေးလေးနဲ့ vodka လေးသောက်လို့ရပြီပေါ့.
နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ Vodka မဟုတ်တဲ့ အမိုက်စားလေးပါ.
Mojito ( ၅မိနစ်)
Rum 60ml လောက်ထည့်၊ သကြား 30ml လောက်ထည့်ပြီး ပူစီနံရွက် တတ်နိုင်သလောက်များများသာထည့်ပါ။ (လက်တစ်ဆုပ်စာလောက် 😉 သံပုရာရည် ၂ဇွန်းလောက်ထည့်ပြီး ဖန်ခွက်ရှည်ရှည်ထဲမှာရောမွှေပါ။ အပေါ်ကနေ ရေခဲတုံးထည့်ပြီး ပူစီနံလေးနည်းနည်းထပ်ထည့်ပါ။ ဒါဆိုရင်တော့ ချဉ်ပြုံးပြုံးမွှေးမွှေးလေးနဲ့ ကော့တေးလ်တစ်ခွက်ရမှာပါ။
ကဲ…တစ်ပတ်လုံးပင်ပန်းနွမ်းနယ်သမျှတွေကို အပြင်ထပ်သွားပြီးထပ်မပင်ပန်းရအောင် အိမ်မှာတင်အေးဆေးကိုယ်တိုင်လုပ်သောက်လို့ရတဲ့နည်းလေးတွေလည်း သိပြီဆိုတော့.. ဒီတစ်ပတ် plan လေးဘယ်လိုလဲ???
Samsung က 5G ပါတဲ့ Exynos 5100 Modem ကို ပြသ
အလန်းစား Offline GPS & Navigation App များ (Android)